Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ịdọ aka na ntị ncheta nri maka Veggie World Brand
Global Vegetarian Foods Corp na -echeta Obi ụtọ Veggie World ika Vege Chicken Breast na Vegefarm ika Vege Stewed Lamb Chunk site n'ọma ahịa n'ihi na ha nwere ike ịnwe akwa nke anaghị ekwupụta na akara ahụ. Ndị nwere nfụkasị akwa ekwesịghị iri ngwaahịa echetara nke akọwara n'okpuru.
Ịdọ aka na ntị ncheta nri ewepụtara na Ọktoba 14, 2021, emelitela ka ịgụnye ozi nkesa ọzọ. Achọpụtara ozi ndị ọzọ n'oge nyocha nchekwa nri nri nke Canada Inspection Agency (CFIA).
Eresịla ngwaahịa ndị a na Alberta na British Columbia ma enwere ike kesaa ya na mpaghara na mpaghara ndị ọzọ.
Brand Product size UPC Koodu
Obi ụtọ na Veggie World Ara nwa ọkụkọ Vege 4 PC 131218 Koodu niile ebe ekwuputaghị akwa na akara
Ahịhịa ubi Vege stewed nwa atụrụ 3000 g 4 713224 372285 Koodu niile ebe ekwuputaghị akwa na akara
Lelee ka ị hụ ma ị nwere ngwaahịa echetara n'ụlọ gị. Ekwesịrị ịtụfu ngwaahịa echetara ma ọ bụ laghachi na ụlọ ahịa ebe azụrụ ya.
Ọ bụrụ na ị nwere nfụkasị ahụ na akwa, erila ngwaahịa ndị echetara n'ihi na ha nwere ike bute mmeghachi omume siri ike ma ọ bụ nke na-eyi ndụ egwu.
• Mụtakwuo maka nri nfụkasị nri
• Debanye aha maka icheta ọkwa site na email wee soro anyị na soshal midia
• Lelee nkọwa anyị gbasara nyocha nchekwa nri yana usoro ncheta
• Kpesa nchekwa nchekwa nri ma ọ bụ nchegbu mkpado
Ụlọ ọrụ kpalitere ncheta a. CFIA na -eme nyocha nchekwa nri, nke nwere ike ibute icheta ngwaahịa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na echetara ngwaahịa ndị ọzọ dị oke egwu, CFIA ga-eme ka ọha mara ọkwa site na ịdọ aka na ntị ncheta nri.
CFIA na -ekwenye na ụlọ ọrụ na -ewepụ ngwaahịa echetara na ahịa.
Enwebeghị mmeghachi omume ọ bụla metụtara oriri ngwaahịa ndị a.